Izinqolobane Ze-Omnicom - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Posted on November 11, 2020 by UStacy Malkan
Kuthunyelwe ekuqaleni ngoMeyi 2019; ibuyekezwe ngoNovemba 2020
Kulokhu okuthunyelwe, i-US Right to Know ilandelela amahlazo okukhohlisa omphakathi ahlanganisa amafemu e-PR ukuthi imidondoshiya yezolimo iBayer AG neMonsanto bathembele kuyo ngemikhankaso yabo yokuvikela umkhiqizo: Ukubonisana kwe-FTI, uKetchum PR noFleishmanHillard. Lawa mafemu banemilando emide yokusebenzisa amaqhinga akhohlisayo ukukhuthaza izinhloso zezepolitiki zamakhasimende abo, kubandakanya nemithi yokubulala izinambuzane, imikhankaso yezokuvikela imboni kawoyela.
I-NYT idalula amasu e-FTI Consulting firm's shady embonini kawoyela: Phakathi ku Novemba 11, 2020 indatshana yeNew York Times, UHiroko Tabuchi wembula ukuthi i-FTI Consulting “isize kanjani ukuklama, abasebenzi nokuqhuba izinhlangano namawebhusayithi axhaswe yizinkampani zamandla ezingabonakala zimelela ukwesekwa emazingeni aphansi kohlelo lwezinto ezimbiwa phansi.” Ngokususelwa ezingxoxweni zakhe nabayishumi nababili ababengabasebenzi be-FTI namakhulu emibhalo yangaphakathi, uTabuchi ubika ngendlela i-FTI eyayiqapha ngayo izishoshovu zezemvelo, yaqhuba imikhankaso yezepolitiki ye-astroturf, yabamba izingosi ezimbili zezindaba nemininingwane futhi yabhala izindatshana ezisekela umkhakha mayelana nokuthwebula, ukumangalelwa kwesimo sezulu nokunye okushisayo Izinkinga zebutton ngesiqondiso esivela ku-Exxon Mobile.
IMonsanto kanye namafemu ayo e-PR bahlela umzamo we-GOP wokwesabisa abacwaningi bomdlavuza: U-Lee Fang kubikwe iThe Intercept ku-2019 kumadokhumenti aphakamisa ukuthi abalawuli abamelene neMonsanto futhi basebenzise ingcindezi yokwenza ucwaningo lwe-herbicide ehamba phambili emhlabeni, i-glyphosate. Indaba ibika ngamasu akhohlisayo e-PR, kufaka phakathi indlela i-FTI Consulting eyabhala ngayo incwadi emayelana nesayensi ye-glyphosate esayinwe ngusihlalo omkhulu we-GOP.
Imibhalo yeMonsanto yembula amaqhinga okudicilela phansi uphenyo lwentshisekelo yomphakathi: Imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ekhishwe ngamacala enkantolo ngo-Agasti 2019 iveze amasu amaningi inkampani kanye namafemu ayo e-PR asetshenziselwe ukukhomba izintatheli nabanye abathonya abaphakamise ukukhathazeka ngemithi yokubulala izinambuzane kanye nama-GMO, futhi bazama ukuphikisa uphenyo ngemisebenzi yabo yi-US Right to Know.
Kwembulwa: kanjani 'isikhungo sezobunhloli' sikaMonsanto sakhomba izintatheli nezishoshovu, nguSam Levin, The Guardian (8.8.2019)
Ngiyintatheli. IMonsanto yakha isu lesinyathelo nesinyathelo lokucekela phansi isithunzi sami, nguCarey Gillam, The Guardian (8.9.2019)
Umkhankaso weMonsanto wokulwa ne-US Ilungelo Lokwazi: Bona imibhalo (9.8.2019)
Bheka futhi ama-fact sheet ama-USRTK, asuselwa kumadokhumenti atholwe kuphenyo lwethu, abika ngabalingani benkampani yangaphandle abasiza ngokuvikela imboni yezibulala-zinambuzane: Ukulandelela Inethiwekhi Yezimboni Yezimboni Eziphathelene Nezibulala-zinambuzane.
NgoMeyi 2019, sabika ngamahlazo amaningi afaka amafemu eBayer PR:
Isikhalazo se 'Monsanto File'
Izintatheli at ULe Monde wabika ngoMeyi 9 ukuthi bathole "Ifayela leMonsanto" eyenziwe yinkampani yezobudlelwano bomphakathi iFleishmanHillard ibala "inqwaba yolwazi" cishe izintatheli ezingama-200, osopolitiki, ososayensi nabanye ababonakala bengaba nomthelela empikiswaneni ye-glyphosate eFrance. Le Monde ufake isikhalazo nehhovisi lomshushisi waseParis lisola ukuthi lo mbhalo ubandakanya ukuqoqwa nokuqhutshwa kwemininingwane yomuntu ngokungemthetho, okugqugquzela ihhovisi lomshushisi vula uphenyo lobugebengu. “Lokhu kutholakala okubaluleke kakhulu ngoba kukhombisa ukuthi kunamasu anenhloso yokuthulisa amaphimbo aqinile. Ngiyabona ukuthi bebezama ukungihlukanisa, ” Lowo owayenguNgqongqoshe Wezemvelo waseFrance uSegolene Royal, okusohlwini, utshele iFrance 24 TV.
"Lokhu kutholakale kubaluleke kakhulu ngoba kukhombisa ukuthi kunamasu afanele okuvala umsindo."
UFrancois Veillerette, isazi sezemvelo nasohlwini, utshele iFrance 24 ukuthi iqukethe imininingwane yokuxhumana yomuntu siqu, imibono nezinga lokuzibandakanya maqondana neMonsanto. "Lokhu kushaqisa kakhulu eFrance," esho. "Asicabangi ukuthi lokhu kuvamile." IBayer isivele yavuma ukuthi uFleishmanHillard waqamba “'uhlu lwamawashi 'lwezibalo ze-pro- noma anti-pesticides”Emazweni ayisikhombisa kulo lonke elaseYurophu, kubika i-AFP. Lezi zinhlu zaziqukethe imininingwane ngezintatheli, osopolitiki namanye amaqembu athintekayo. I-AFP ithe yafaka isikhalazo enkampanini yezomthetho yaseFrance ngoba ezinye zezintatheli zayo zazisohlwini olwavela eFrance.
Bayer waxolisa futhi wakusho kwamiswa ubudlelwano bayo namafemu athintekayo, kubandakanya neFleishmanHillard kanye nePublicis Consultants, kusalindwe uphenyo. "Okusemqoka kakhulu kithi ukudala obala," Kusho uBayer. "Asikubekezeleli ukungaziphathi kahle enkampanini yethu." (Amafemu kamuva asulwa ekwenzeni okungalungile yinkampani yabameli eqashwe yiBayer.)
Umshushisi waseFrance uvula uphenyo ngefayela elisolwayo leMonsanto, Reuters (5.10.19)
UBayer uthi iMonsanto kungenzeka igcine amafayela kubantu abanethonya kulo lonke elaseYurophu, Reuters (5.13.20)
IMonsanto 'yahlanganisa idosisi' kubaphikisi bezepolitiki, I-BBC (5.13. 20)
Ukubeka njengentatheli ecaleni likaMonsanto
Ukwengeza ezinkingeni zeBayer PR, i-AFP ibike ngoMeyi 18 ukuthi umsebenzi wenye inkampani "yokulawulwa kwezinhlekelele" PR isebenza neBayer neMonsanto - FTI Consulting - wabanjwa ezenza intatheli ezimele ecaleni likahulumeni waseSan Francisco elaphela ngo Isahlulelo esingu- $ 80 million ngokumelene neBayer ngenxa yokukhathazeka komdlavuza we-glyphosate.
Isisebenzi se-FTI Consulting uSylvie Barak ubonakale exoxa nezintatheli ngemibono yezindaba ecaleni. Uthe usebenzela i-BBC futhi akazange adalule ukuthi empeleni usebenzela inkampani ye-PR.
Umxhumanisi we-FTI uzenza intatheli ecaleni likaMonsanto, I-AFP (5.18.19)
Izinhloli zikaMonsanto: I-agri-chemical giant inomlando ocacile wokusebenzisa amaqhinga angabonakali ukuhlasela abagxeki nokuthonya abezindaba, nguPaul Thacker, uHuffington Post (9.14.19)
UKetchum noFleishmanHillard basebenzisa i-GMO PR salvo
Ngo-2013, imboni yezolimo yathinta uFleishmanHillard noKetchum, bobabili ababengabakwa-Omnicom, ukuzokwakha PR kuyacasula ukuvuselela isithombe yemikhiqizo yayo ehlanganisiwe ye-GMO nemithi yokubulala izinambuzane. Kukhethwe iMonsanto UFleishmanHillard ukuze "akhe kabusha" igama lakhe phakathi "kokuphikisana okukhulu" nokudla okushintshwe izakhi zofuzo, ngokusho kweHolmes Report. Cishe ngaso leso sikhathi, uFleishmanHillard naye waba yi- I-ejensi ye-PR yerekhodi leBayer, kanye noMkhandlu Wezolwazi Lwezinto Eziphilayo (i-CBI) - iqembu lokuhweba kuxhaswe ngemali IBayer (iMonsanto), iCorteva (iDowDuPont), iSyngenta neBASF - baqashe inkampani yezobudlelwano nomphakathi yakwaKetchum ukuze yethule umkhankaso wokumaketha obizwa nge-GMO Answers.
Amaqhinga okujija aqashwe yila mafemu afaka phakathi “wooing mama Blogger”Nokusebenzisa amazwi ochwepheshe okuthiwa“ abazimele ”ku-“susa ukudideka nokungathembani”Mayelana nama-GMO. Kodwa-ke, kwavela ubufakazi bokuthi amafemu e-PR ahlela futhi abhalele abanye ochwepheshe "abazimele". Isibonelo, imibhalo etholwe yi-US Right to Know ikhombisa lokho Kubhalwe uKetchum okuthunyelwe kwe GMO Izimpendulo ezisayinwe ngu- Uprofesa wase-University of Florida owathi uzimele njengoba wayesebenza ekusithekeni neMonsanto kumaphrojekthi we-PR. Iphini likamongameli omkhulu eFleishmanHillard kuhlelwe inkulumo a UC Davis uprofesa futhi wamqeqesha kanjani "ukunqoba abantu ekamelweni" at an Impikiswano ye-IQ2 ukukholisa umphakathi ukwamukela ama-GMO. UKetchum naye unikeze uprofesa amaphuzu okukhuluma kwinhlolokhono yomsakazo mayelana nocwaningo lwesayensi.
Izifundiswa beziyizithunywa ezibalulekile zemizamo yokunxenxa izimboni ukuthi ziphikisane nokulebula kwe-GMO, kubika i INew York Times ngo-2015. "Osolwazi / abacwaningi / ososayensi banesigqoko esikhulu esimhlophe kule mpikiswano kanye nokwesekwa ezifundazweni zabo, kusuka kosopolitiki kuya kubakhiqizi," uBill Mashek, iphini likamongameli eKetchum, wabhalela uprofesa wase-University of Florida. "Qhubeka nomsebenzi omuhle!" Iqembu lezentengiselwano le-CBI lisebenzise imali engaphezu kwezigidi eziyi-11 zamaRandi kwi-GMO Answers kaKetchum kusukela ngo-2013, ngokusho kwamarekhodi entela.
Impumelelo ye-GMO Answers 'management management'
Njengophawu olulodwa lwempumelelo yalo njengethuluzi le-PR spin, Izimpendulo zeGMO zazikhona kufakwe ohlwini lomklomelo wokukhangisa we-CLIO ngo-2014 esigabeni se- “Crisis Management & Issue Management.” Kule vidiyo ye-CLIO, uKetchum uziqhayisa ngokuthi kucishe kwaphindaphindeka kanjani ukunakwa kwabezindaba ngama-GMO kanye "nokulinganisa okungu-80% kokusebenzisana" ku-Twitter. Okuningi kwalokhu kuxhumana okuku-inthanethi kuvela kuma-akhawunti abonakala ezimele futhi awadaluli ukuxhumana kwawo nomkhankaso we-PR wemboni.
Yize ividiyo kaKetchum ithi Izimpendulo zeGMO "zizokuchaza kabusha obala" ngolwazi oluvela kochwepheshe "abangenalutho oluhlungiwe noma olucutshunguliwe, futhi kungekho mazwi athulisiwe," uhlelo lweMonsanto PR luphakamisa ukuthi inkampani ibheke izimpendulo zeGMO ukusiza imikhiqizo yayo ngendlela efanele. I- idokhumenti kusuka ku-2015 kubhalwe Izimpendulo ze-GMO phakathi "kwabalingani bemboni" lokho kungasiza ukuvikela i-Roundup ekukhathazekeni komdlavuza; esigabeni "sezinsizakusebenza" esisekhasini 4, lolu hlelo lubhale izixhumanisi eziya kuzimpendulo ze-GMO kanye nemibhalo yeMonsanto engadlulisa umyalezo wenkampani othi "iGlyphosate ayiyona i-carcinogenic."
Le vidiyo yeKetchum yathunyelwa kuwebhusayithi ye-CLIO futhi yasuswa ngemuva kokuyinaka.
Ibhizinisi lakwaSeedy: Yikuphi Ukudla Okukhulu Okucashile ngomkhankaso wayo we-GMO PR, nguGary Ruskin, umbiko we-USRTK (2015)
Yini izimboni zezolimo nezogwayi ezifanayo ngayo: amafemu e-PR, ama-opharetha, amaqhinga, nguGary Ruskin, umbiko we-USRTK, Isahluko 4 (2015)
UHillard noKetchum ka-Omnicom: imilando yenkohliso
Kungani noma iyiphi inkampani ingabeka uFleishmanHillard noma uKetchum phambi kwemizamo yokukhuthaza ukwethembana kunzima ukuyiqonda, uma kubhekwa umlando wabo wenkohliso ebhaliwe. Ngokwesibonelo:
Kuze kube ngo-2016, uKetchum wayengu- PR ngokuqinile eRussia kanye noVladimir Putin. Ngokuvumelana ne imibhalo etholwe yiProPublica, UKetchum wabanjwa ebeka ama-pro-Putin op-eds ngaphansi kwamagama "ochwepheshe ababonakala bezimele" ezindaweni ezahlukene zezindaba. Ngo-2015, i- Uhulumeni waseHonduran ohlangene waqasha uKetchum ukuzama ukuvuselela isithunzi sayo ngemuva kwesigameko senkohlakalo esabiza izigidi zamadola.
Imibhalo idalulwe kuMama Jones kukhombisa ukuthi uKetchum usebenze nenkampani yonogada ezimele "ehlola iGreenpeace nezinye izinhlangano zemvelo kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1990s okungenani ngonyaka ka-2000, bephanga imibhalo emigqonyeni kadoti, bezama ukutshala izinkampani ezifihlekile ngaphakathi kwamaqembu, ukufaka amahhovisi amahhovisi, ukuqoqa amarekhodi efoni ezishoshovu, nemihlangano eyimfihlo engena ngaphakathi. ” UFleishmanHillard uphinde wabanjwa esebenzisa amaqhinga angekho emthethweni wokulwa nabameli bezempilo yomphakathi kanye nabameli bokulawulwa kukagwayi egameni lenkampani kagwayi iRJ Reynolds, ngokusho kocwaningo olwenziwe nguRuth Malone ku Ijenali yaseMelika Yezempilo Yomphakathi. Inkampani i-PR ize yaqopha ngokufihla umsindo imihlangano nezingqungquthela zokulawulwa kukagwayi.
UFileishman uHillard wayenjalo inkampani yezobudlelwano nomphakathi yeThe Tobacco Institute, okuyinhlangano eyinhloko yezimboni zikagwayi, iminyaka eyisikhombisa. Embhalweni ka-1996 Washington Post, uMorton Mintz elandisa le ndaba ngendlela iFleishmanHillard neTobacco Institute abaguqula ngayo iSikhungo Sempilo esincomekayo saba yiqembu eliphambili lomkhakha kagwayi emzamweni wawo wokuqeda ukukhathazeka komphakathi ngobungozi bokubhema intuthu kagwayi. UKethum futhi wasebenzela imboni kagwayi.
Womabili la mafemu kwesinye isikhathi asebenze ezinhlangothini zombili zodaba. UFleishmanHillard ubelokhu kuqashwe imikhankaso yokulwa nokubhema. Ku-2017, uKetchum wethule i- i-spin-off firm ebizwa ngokuthi yi-Cultivate ukwenza imali emakethe yokudla ephilayo ekhulayo, noma ngabe izimpendulo ze-GMO zikaKetchum zikuhlambalazile ukudla okungokwemvelo, zithi abathengi bakhokha “imali ephezulu” yokudla okungcono kunokudla okulinywa ngokujwayelekile.
IBlack Ops, Amaqembu Aluhlaza, Kungani inkampani yangasese yezokuphepha ihlola iGreenpeace nezinye izingubo zemvelo?, nguJames Ridgeway, uMama Jones (4.11.2008)
Kusuka eRussia Nge-PR: Izichasiselo ezibhalwe ngochwepheshe ababonakala bezimele zabekwa egameni likahulumeni waseRussia yinkampani yakhe ye-PR, uKetchum, nguJustin Elliot, ProPublica (9.12.13)
Ukubonisana kwe-FTI: ukukhohliswa kwesimo sezulu kanye nezibopho eziningi zikagwayi
I-FTI Consulting, "ukuphathwa kwezinhlekelele" PR eqinile esebenza neBayer futhi okwakungumsebenzi wakhe wabanjwa ezenza intatheli ocwaningweni lwakamuva lomdlavuza weRoundup eSan Francisco, wabelana ngokufana okuningana noFleishmanHillard noKetchum, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwamaqhinga okucasha, ukungabi sobala kanye nomlando wokusebenzisana nomkhakha kagwayi.
Ifemu yaziwa njengomdlali ophambili emizameni ye-ExxonMobil yokubalekela ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu. Njengo-Elana Schor no-Andrew Restuccia kubikwe ePolitico ngo-2016:
“Ngaphandle kuka [Exxon] uqobo, ukuvimba okukhulu kwezwi kulokho okuvelayo kuqhamuke e-FTI Consulting, okuyinkampani egcwele abasizi bakudala beRiphabhulikhi esize ukuhlanganisa i-GOP ekuvikeleni izibaseli. Ngaphansi kwesibhengezo se-Energy in Depth, okuwumsebenzi owenzelwe i-Independent Petroleum Association of America, i-FTI ifake izintatheli ngama-imeyili aphakamisa “ukuhlangana” phakathi kwezishoshovu eziluhlaza kanye nama-AGs ombuso, futhi yaphakamisa imibuzo mayelana noxhaso lwe-InsideClimate's Rockefeller. ”
Abasebenzi bakwa-FTI Consulting bake babanjwa bezenza izintatheli phambilini. UKaren Savage ubike Januwari 2019 kuzindaba Zesimo Sezulu Sezulu, “Osomaqhinga ababili bezobudlelwano nomphakathi abamele i-Exxon muva nje bazenze izintatheli emzamweni wokuxoxisana nommeli omele imiphakathi yaseColorado emangalela i-Exxon ngomonakalo ohlobene nokuguquka kwesimo sezulu. Osomaqhinga — uMichael Sandoval noMatt Dempsey — baqashwe yi-FTI Consulting, okuyinkampani ende exhumene nemboni kawoyela negesi. ” Ngokusho kwe-Climate Liability News, la madoda amabili abhalwe njengababhali beWestern Wire, iwebhusayithi ephethwe yizintshisekelo zikawoyela futhi enabasebenzi be-FTI Consulting, ebuye inikeze abasebenzi kwi-Energy In Depth, ucwaningo olwenziwe ngophethiloli umkhankaso wokufinyelela emphakathini. ”
I-Energy In Depth yaziveza njenge "mama ne-pop shop" emele abahlinzeki bamandla amancane kepha yadalwa yizinkampani ezinkulu zikawoyela negesi ukunxenxa ukuqedwa komthetho, I-DeSmog blog ibike ngo-2011. Iqembu le-Greenpeace lathola i Imemo yomkhakha we-2009 ichaza I-Energy In Depth “njengomkhankaso omusha womkhakha obanzi wemboni… wokulwa nemithetho emisha yezemvelo, ikakhulukazi maqondana nokuqhekeka kuka-hydraulic” “obekungeke kwenzeke ngaphandle kokuzibophezela kwezezimali kusenesikhathi” kwezintshisekelo ezinkulu zikawoyela negesi ezibandakanya iBP, iHalliburton, iChevron, I-Shell, i-XTO Energy (manje ephethwe yi-ExxonMobil).
Esinye isici esifana nalawa mafemu yizinhlangano zawo zemboni kagwayi. I-FTI Consulting “inomlando omude wokusebenzisana nemboni kagwayi,” ngokusho kuka AmaTactics Tactics.org. Ukuseshwa kwelabhulali ye-UCSF Tobacco Industry Documents uletha amadokhumende angaphezu kuka-2,400 XNUMX ephathelene ne-FTI Consulting.
I-Exxon iyaxokozela iqukethe impi yenkolo yezulu, IPolitico (5.9.2016)
Izikhulu ze-FTI Consulting zizenza izintatheli zibuze ummeli ohola icala lesimo sezulu enkampanini, Idokodo Lesimo Sezulu (1.21.19)
Ukubikwa okuningi kumahlazo kaBayer PR
Ifayela leMonsanto: Abantu abaningi bahlukaniswe ngokungemthetho ngokwesimo sabo ku-glyphosate, nguStéphane Foucart noStéphane Horel, Le Monde (5.9.19).
Ifayela leMonsanto: Umhlaba Uyakhalaza, nguLuc Bronner, Le Monde (5.9.19)
Abantu abahlukaniswe iMonsanto ngokwesikhundla sabo ku-glyphosate, nguSébastien Sabiron, France 2 TV, (5.10.19)
Ukusolwa kokubhaliswa ngokungemthetho nguMonsanto: uphenyo lwenkantolo oluvulekile nezikhalazo ezintsha lapho kulungiselelwa, ”NguLe Monde nge-AFP (5.11.19)
Ividiyo evela eFrance 2 ngokuphendula kwabantu ababhalwe kufayela leMonsanto
Inkulumompikiswano yeFrance 24 noCarey Gillam, Nina Holland, Francois Veillerette kanye UKavin Senapathy
Omaye Bomthetho BaseBayer Bayakhuphuka Ngokungena Kwifayela LeMonsanto, ”NguRuth Bender, iWall Street Journal (5.13.19)
I-Bayer Imisa Ubudlelwano Be-Ejensi Elindile Ukuphenya kwe-Monsanto, ”Ngu-Arun Sudhamen, Umbiko kaHolmes (5.13.19)
UBayer uxolisa ngohlu oluyimfihlo lwabagxeki baseMonsanto, UDeutsche Welle (5.12.19)
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, izibulala-zinambuzane BASF, Bayer, UBill Mashek, I-CBI, Corteva, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, DowDuPont, Amandla Ekujuleni, I-ExxonMobil, UmnumzanaHillard, France 24 TV, UFrancois Veillerette, I-FTI Ukubonisana, Izimpendulo ze-GMO, UKetchum, Okwezwe, UMat Dempsey, UMIchael Sandoval, Monsanto, Ifayela leMonsanto, Omnicom, Ababonisi bePublicis, Putin, RJ Reynolds, USegolene Royal, Syngenta, Isikhungo Sogwayi, University of Florida
Izimpendulo zeGMO ngumkhankaso wokumaketha nowokuxhumana nomphakathi wezinkampani ezibulala izinambuzane
Posted on August 31, 2020 by UStacy Malkan
Izimpendulo zeGMO manje zixhaswe yi- ICropLife International, iqembu lezentengiselwano elimele izinkampani ezinkulu kakhulu zezibulala-zinambuzane futhi eliphethwe yi Inkampani yakwaKetchum yomphakathi. (Phambilini ibixhaswe yiqembu lomkhakha wezibulala-zinambuzane i-Council for Biotechnology Information, okuyi kuvaliwe ngo-2019.)
UKetchum wakhokhelwa imali engaphezulu kwezigidi ezingama- $ 14 ukwenza i-GMO Answers kusuka ngo-2014-2018, amarekhodi entela akhombisa.
Imibhalo yeMonsanto PR igama leGMO Izimpendulo njengomlingani osemqoka embonini yomkhakha ku vikela ukubulala ukhula kwe-Roundup futhi uphikise ukusebenza obala kokubambisana kwezimboni nezifundo.
Izimpendulo ze-GMO ikhokhiswa njengesithangami lapho abathengi bangathola khona izimpendulo eziqondile kochwepheshe abazimele ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo, kanti ezinye izintatheli zikuthatha ngokungathi sína njengomthombo ongachemile. Kepha iwebhusayithi iyithuluzi lokumaketha lezimboni eliqonde ngqo ukuhambisa ama-GMO ngendlela efanele.
Ubufakazi bokuthi Izimpendulo ze-GMO iyithuluzi lepropaganda elilawula ukubhekana nezinkinga elingenakwethenjelwa.
Izimpendulo zeGMO zenziwa njengemoto yokuhambisa umbono womphakathi ngokuthanda ama-GMO. Ngokushesha ngemuva kokuba iMonsanto kanye nabalingani bayo behlule isinyathelo sokuvota sika-2012 sokuqamba ama-GMO eCalifornia, eMonsanto umemezele izinhlelo ukwethula umkhankaso omusha wobudlelwano nomphakathi wokwakha kabusha idumela lama-GMO. Baqashe inkampani yezobudlelwano nomphakathi iFleishmanHillard (ephethwe ngu-Omnicom) ukuthola i umkhankaso wabayisikhombisa.
Njengengxenye yomzamo, inkampani ye-PR iKetchum (nayo ephethwe ngu-Omnicom) yaqashwa yi-Council for Biotechnology Information - ixhaswe iMonsanto, BASF, Bayer, Dow, Dupont neSyngenta - ukudala i-GMOAnswers.com. Isayithi lithembise uku susa ukudideka futhi ususe ukungathembani mayelana nama-GMO asebenzisa amazwi angahleliwe okuthiwa “ochwepheshe abazimele.”
Kepha bazimele kangakanani labo ngoti?
Iwebhusayithi igawula amaphuzu okuxoxa aqanjwe ngokucophelela axoxa indaba enhle ngama-GMO ngenkathi edlala phansi noma engazinaki izingozi zezempilo nezemvelo. Isibonelo, lapho ubuzwa ukuthi ngabe ama-GMO aqhuba ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane, leli sayithi linikeza u-convoluted no, ngaphandle kwemininingwane ebuyekezwe ngontanga ekhombisa ukuthi, yebo, empeleni, kunjalo.
Izitshalo ze- "Roundup Ready" ze-GMO zikhulise ukusetshenziswa kwe-glyphosate, a mhlawumbe umdlavuza womuntu, by amakhulu ezigidi zamaphawundi. Uhlelo olusha lwe-GMO / pesticide olubandakanya i-dicamba seluholele ekubhujisweni kwe izitshalo zesoya phesheya kwe-US, kanye ne-FDA ibamba iqhaza kulo nyaka ukusetshenziswa kathathu ka-2,4-D, i-herbicide endala enobuthi, ngenxa yezitshalo ezintsha ze-GMO ezenzelwe ukumelana nayo. Konke lokhu akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo, ngokusho kwe-GMO Answers.
Imibuzo ephathelene nokuphepha iphendulwa ngezitatimende ezingamanga ezifana nokuthi "zonke izinhlangano zezempilo ezihola phambili emhlabeni zisekela ukuphepha kwama-GMO." Asitholanga kukhulunywa ngesitatimende esisayinwe ososayensi, odokotela kanye nezifundiswa ezingama-300 abathi kukhona “akukho ukuvumelana kwesayensi ngokuphepha kwe-GMO,”Futhi asizitholanga izimpendulo zemibuzo esiyithumele ngalesi sitatimende.
Izibonelo zivele lokho I-Ketchum PR ibhale ezinye izimpendulo ze-GMO lawo asayinwa “ochwepheshe abazimele.”
Uhlu olufushane lomklomelo we-PR wokulawulwa kwezinkinga
Njengobunye ubufakazi isiza siyimoto ye-spin: Ngo-2014, Izimpendulo ze-GMO kwaba njalo kufakwe ohlwini lomklomelo wokukhangisa we-CLIO esigabeni se- "Public Relations: Crisis Management & Issue Management."
Futhi inkampani ye-PR edale izimpendulo ze-GMO yazishaya isifuba ngethonya layo kwizintatheli. Ku-video efakwe kwi-website ye-CLIO, uKetchum uzishaye isifuba ngokuthi i-GMO Answers “icishe yakuphinda kabili ukusakazwa kwabezindaba ngama-GMO.” Le vidiyo isuswe ngemuva kokuthi i-US Right to Know iyinakile, kepha thina uyigcine lapha.
Kungani izintatheli zingayethemba imoto yokumaketha eyakhiwe nguKetchum njengomthombo othembekile kunzima ukuyiqonda. Ketchum, okwaze kwaba yi-2016 PR ngokuqinile eRussia, kufakiwe ku imizamo yobunhloli ngokumelene nokungenzi inzuzo ukhathazekile ngama-GMO. Awusiwona umlando ozibandakanya ekuqedeni ukungathembani.
Njengoba kunikezwe ukuthi Izimpendulo ze-GMO iyithuluzi lokumaketha elenziwe futhi lixhaswe yizinkampani ezidayisa ama-GMO, sicabanga ukuthi kungumdlalo ofanele ukubuza ukuthi: Ngabe “ochwepheshe abazimele” ababoleka ukwethembeka kuwebhusayithi - abaningi babo abasebenzela amanyuvesi kahulumeni futhi abakhokhelwa ngabakhokhi bentela - ozimele ngokweqiniso futhi osebenzela umphakathi? Noma basebenza ngokubambisana nezinkampani kanye namafemu obudlelwano bomphakathi ukusiza ukuthengisa umphakathi indaba ye-spin?
Ekufuneni lezi zimpendulo, i-US Right to Know ifake izicelo ze-Freedom of Information Act Ukufuna ukuxhumana kosolwazi abaxhaswa ngemali ababhalela iGMOAnswers.com noma basebenze kweminye imizamo yokukhuthaza i-GMO. Ama-FOIA yizicelo ezincanyana ezingafaki imininingwane yomuntu siqu noma yezifundo, kepha kunalokho funa ukuqonda ukuxhumana okukhona phakathi kosolwazi, izinkampani zezolimo ezithengisa ama-GMO, izinhlangano zazo zezohwebo kanye nama-PR kanye namafemu okusiza aqashelwe ukukhuthaza ama-GMO kanye nokulwa nokufakwa amalebula ngakho-ke sigcinwa ebumnyameni ngalokho esikudlayo.
Landela imiphumela ye- Uphenyo lwase-US Right to Know lapha.
Bona wethu I-Pesticide Industry Propaganda Tracker ukuthola eminye imininingwane mayelana nabadlali ababalulekile emikhakheni yamakhemikhali emizamweni yokuxhumana nomphakathi.
Ungasiza ukwandisa uphenyo lweLungelo Lokwazi ngo wenza umnikelo ongadonswa ngentela namuhla.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane BASF, Bayer, I-CLIO, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, ICropLife International, Dow, Dupont, Izicelo ze-FOIA, glyphosate, Izimpendulo ze-GMO, GMO spin, UKetchum, Monsanto, Omnicom, izibulala-zinambuzane, RoundUp, Syngenta